Thenga i-Xiaomi Mi6 (SNAPDRAGON 835) - Khetha okuphephile
 Thenga i-Xiaomi Mi6 (SNAPDRAGON 835)
Micael Engrácia 2018-01-30T15:09:52+00:00
Uzimisele ukuthengaXiaomi Mi6?
Cishe usuvele wazi ukuthi nguyena Smartphones best of 2017.
Kulesi sihloko esiphelele, wazi konke kwi-smartphone yakho futhi lapho unga khona ukuthenga.
Okuhlobene: I 12 Kuhle Phones Good eshibhile (80-230 €)
Manje ake siye phansi esihlokweni esiyinhloko.
I-Snapdragon 835 (i-Octa-core)
Kulabo abangamazi ingxenye ye-Xiaomi Mi, lawa angama-Smartphones ayingxenye ye- inhliziyo yenkampani.
Kusuka ku-2014 kuya ku-Xiaomi akazange ayeke ukuguquka, ufaka izinkulungwane zemikhiqizo ehlukene, nakuba eziningi zazo ukuze uphumelele , ungafani nokuphumelela kwe-Xiaomi Mi3 / Mi4 / Mi5 futhi manje I-Mi6.
Kodwa yini abantu abayilindele kumodeli ngamunye omusha ku-Mi range?
Ingabe izingxenye ezinhle kakhulu yonyaka ngamunye, efakwe kwi-smartphone ngengozi engcono kakhulu / inzuzo.
Bona i Isimemezelo esisemthethweni I-Xiaomi I-6 yami:
Ikhishwe ngo-Ephreli ka-2017, i-smartphone etholakele ukubuyekezwa okuhle by ochwepheshe, izintatheli kanye nawetubers omkhulu.
Izingxenye: Xiaomi Mi6
Owokuqala kuhlu lwazo izingxenye yinkampani, inesibopho sezinkulungwane zemisebenzi yokubala, kufaka phakathi nezinye izici ezibalulekile ezifana nezinzwa, iprosesa yehluzo, imodemu ye-4G, i-Wifi nabanye.
Umseshi: I-Qualcomm Snapdragon 835
O umlandeli odunyiswayo Snapdragon I-821, ekhishwe ngonyaka odlule, i-821 ikhishwe lungisa izimbungulu nokuthuthukiswa we-Snapdragon 820.
I-Smartphones enikezwe i-Snapdragon 821 yiyona Samsung Galaxy S7, I-Oneplus 3T e I-HTC10 , ezingeni le-chipset yiyona umzuzu wegolide of 2016.
I-835 snapdragon isivele isivele eyenziwe ngesilinganiso se-10 nm (inqubo yefayili ye-821 ngu-14nm).
Ukunciphisa kwe-chips kuvumela okungcono ukuguquguquka kubakhiqizi be-smartphone, abazoba negumbi elengeziwe lamabhethri amakhulu, ama-smartphones aphansi kanye a ukucubungula.
I-SoC Snapdragon 835 Xiaomi I-Mi6 i-Octa-Core esekelwe kwisakhiwo se-Kyro (iprosesa ye-4 ene imvamisa enkulu ye-2.45GHz nezinye ezine kuya komkhawulo we-1.9GHz).
I-GPU yi-Adreno 540, eyokuphikisa imidlalo evelele kakhulu emakethe.
Iletha i-6GB ye-RAM (LPPD4X ye-64 bits) kuzo zonke izinguqulo, umehluko izobe isitoreji phakathi kwe-64GB ne-128GB.
Ikhamela: Xiaomi Mi6
Enye yezinhlobo zokuqala ze-Xiaomi equkethe amakhamera amabili anomshini we-12 MP (I-Sony IMX386 Exmor RS), ebeka umkhuba ofanayo ubuchwepheshe ku-2017.
I-lens angled ne-telephoto lens ifakwe i-12 i-sensor MP, vumela i-2x zoom zoom ne-zoom 10x yedijithali, usebenzisa i-algorithm ethi "ISP".
Kulabo abadinga ukuqiniswa okungaphezulu kumavidiyo, ungakwazi ukuphumula.
I-Xiaomi Mi6 inayo i-stabilizer I-OIS (i-4 axes), ihlangene nezinzwa ze-Gyros ne-accelerometer, sizoba nokuqopha okuzinzile ikhwalithi enkulu.
Umklamo: Xiaomi Mi6
Lokhu kuzuze ezinye izici we-DNA ye-Mi5 S, manje esinayo izingqimba ezizungezile , lokhu kungenzeka nge-entsha ubuchwepheshe I-3D ingilazi evaliwe.
Isakhiwo se-smartphone sakhiwe ngensimbi ukumelana okukhulu.
Ukwenza i-smartphone eqinile futhi ehlanganisiwe.
Enye entsha iyona ukumelana ukumelana namanzi (isibonelo, imvula).
ukunakwa: Le smartphone ayinamanzi, ayikho isitifiketi se-IP68 noma se-IP67.
Echerry: Xiaomi Mi6
O usayizi we-Xiaomi Mi6 i-145.2 x 70.5 x 7.5 mm,
Ukuboniswa kuyi-inthanethi ye-5.15 amasentimitha, okwenza kube ukhululekile ezandleni isilinganiso kwesikrini somzimba yi-71.4%.
Ngesinqumo se-HD ephelele (1920x1080p), unayo ubuningi Amaphikseli we-428ppi.
Um qokomisa yi-Eye-Care technology.
Isekelwe ekuhlungeni ukukhanya okwesibhakabhaka kwesikrini, ukuvumela ngakho phumula umbono wakho ngenkathi usinika sebenzisa kuya ku-smartphone nakho konke lokhu ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi imibala ekhanyayo.
Ibhetri: Xiaomi Mi6
Ibhethri ngu-3350 mah, ucabangela ukuthi i-Snapdragon 835 25% iphumelele kakhudlwana kunokwakhe ngaphambili, singalindela izinsuku ze-1 noma ze-2 ngezinsuku ukusetshenziswa okulinganiselayo.
Kodwa uma kunjalo umsebenzisi efuna kakhulu, uzokwazi ukujabulela ubuchwepheshe be-Quick Charge 3.0:
Iyini i-Quick Charge 3.0?
I-Quick-Charge ikuvumela ukuba ukhokhise i-smartphone yakho ku- isivinini esikhulu kakhulu kuya evamile.
Ezivivinyweni eziningi ungakwazi ukukhokhisa i-85% yebhethri ngehora elilodwa.
O isixhumi Ikhebuli le-USB nguhlobo C.
Uhlelo lokusebenza: Xiaomi Mi6
Isistimu yokusebenza yamanje i-Android 7.1.1 (i-Nougat Version).
Kufaka inguqulo yakamuva ye-MIUI8, evumela ukuhambisana kangcono nawo wonke umuntu izesekeli do indawo yonke Xiaomi.
I-smartphone yakho inayo umnikazi kuya ku-Dual-Sim (i-Dual Nano).
I-Antutu: Xiaomi Mi6
I-Antutu isofthiwe ekhomba ukuhlukaniswa kwe-smartphone, ukuhlaziya okuhlukahlukene izingxenye , lokhu kunikeza ukuhlolwa kokugcina kumaphoyinti.
Ukuhlolwa kokugcina kwe-Xiaomi Mi6 kwakuyizingxenye ze-184.000, okwenza amanye ama-smartphone angcono kakhulu kulo nyaka.
(Idatha ethathwe kuwebhusayithi Kimovil).
Especificações I-Xiaomi Mi6
Rede I-GSM / HSPA / LTE
Ubukhulu X x 145.17 70.49 7.45 mm
SIM I-SIM yesibili (i-Nano-SIM)
Isikrini I-LTPS i-IPS LCD
Usayizi weskrini Amasentimitha angu-5.15
Isixazululo sesikrini 1920 × 1080
Ukuvikelwa I-Corning Igalari ye-Gorilla 3
Isistimu yokusebenza I-MIUI 8
CPU I-Snapdragon 835 (i-Octa-core 2.45Ghz)
GPU I-Adreno 540
I-Memory Card Slot Ayisekeli
Imemori yangaphakathi 32 / 64 GB
Indlu I-Double 12 Mpx
Ibhetri 3250 mah
USB Thayipha C
Thenga i-Xiaomi Mi6
Isifinyezo: Thenga i-Xiaomi Mi6
I-Xiaomi Mi6 yiyona ukuthenga ngempumelelo , isethi yayo yezici ezifana nalokhu:
I-Snapdragon yayo enamandla 835.
Umdwebo we-Glass we-3D.
I-12 Megapixel ikhamera eyodwa.
Inguqulo yamanje ye-Android.
Konke lokhu kwenza ukuthenga kwakho ekhangayo kakhulu.
Njengoba wonke ama-Smartphones anakho izinzuzo nokuqeda , njengokuntuleka kwe-Jack 3.5mm, kodwa kubheka abasebenzisi bayo iphakheji kuhlanganisa a i-adapter ye-3.5mm jack.
Amahemuhemu aveza ukuthi i-Nokia 8 Pro iza maduze ...
I-Smartphone ye-Android enamandla kunazo zonke kaJuni
Izithombe zokuqala ezisemthethweni ze-LG G6, i-flagship entsha ...
Ifoni Eyisisekelo Ngezandla Zomdali We-Android
Amahemuhemu ngo-OnePlus X2 ayinkohliso
I-Xiaomi ne-Nokia baba abalingani
I-RED Hydrogen One, i-Revolutionary Smartphone